Ukukhetha Ingane kanye outerwear Engane abazali inqubo kunalokho xaka futhi isikhathi eside. Phela, udinga ukuthenga izingubo ngakho ukuthi uyalithanda ingane ukuzinqumela futhi zanelise zonke izifiso kanye nezidingo abazali. Inengi bonke abantwana bazimisele ukuze zibukeke kangcono kunabanye, ezimweni ezilingayo ngokushintshashintsha emakhasini omagazini ecwebezelayo futhi ukufunda izihloko ezintsha mayelana izitayela oluzayo in fashion. Futhi awukwazi ukusho ukuthi lokhu kwenzeka kuphela kubantu amantombazane. Omama, ngaphandle nje kokuba outerwear izingane nentsha kufanele sibe imfashini kanye zanamuhla, nathi kufanele sithandaze kuye futhi, ukuthi eliphezulu futhi ayibizi kakhulu. Kakade izingane zikhule "ngokukhulu ukushesha," futhi yonke isizini esichithwa ukuthengwa ibhantshi ebusika noma abazali elingenamikhono ngezinye izikhathi nje akwenzeki amathuba impahla. Kodwa ukuthenga osayizi ambalwa sikhulu kakhulu, kakhulu, akufanele baye bacabange kuphela ngezithombe kanjani outerwear, hhayi wathenga ngobukhulu constrains ukunyakaza kwengane, futhi unomuzwa wokuthi ke ungakhululekile. izingubo zezingane kufanele kube ukhululekile, ngoba umntwana uyoba ukuba kuwo isikhathi sakhe esiningi. Ungqimba phezulu izingubo izingane phezulu kufanele manzi, ngeke ukukunikeza izindwangu ezifana Taslan, Oxford, Jordan, Dyuspa. Kakade izingane, ikakhulukazi abafana, engathandi ukuya ngaphansi isambulela endaweni epholile ekwindla zinsuku, ngakho wokunakekela ingane kufanele athathe outerwear.
"Ngakho lapho ukuthenga imfashini, yesimanje, eliphezulu futhi eziphansi izingubo zezingane?" - ubuza. Kungakhathaliseki ukuthi ucabanga ukuthenga izingubo ezitolo zezingane zasemoyeni. Asithathe sihlolisise izinzuzo ezitolo ngokusebenzisa izingubo esitolo izingane inthanethi sika.
Okokuqala, amanani kulezi ezitolo ephansi kakhulu kunalokho esitolo njalo. Phela, bethenga online akazange esichithwa iqashwe isikhala ezibizayo okudayisa, esiphezulu, kuyinto ukuqasha isikhala esincane USB.
Okwesibili, awudingi ukuba ime sezimoto, "push" ku ezokuthutha zomphakathi, kanjalo behlupha wena ingane yakho uchitha imizwa namandla akhe kanye nengane yakhe. Awusadingi kulayini egumbini sigqoka, ngoba ngenkathi inani abazali abafuna ukuba sigqoke ngokufudumele izingane abawuthandayo kukhuphuke ngo izikhathi eziningana. Udinga nje kuphela ukuba uye ku-inthanethi kwi-website ye omunye izinjini nokubhala umkhiqizo wakho encomekayo kubha yokusesha. Kanye ingane akhethe intandokazi ebusika noma ekwindla ibhantshi lakho noma ijazi futhi ukubeka umyalelo inthanethi. Yonke enye into kuzokwenza izingubo esitolo izingane inthanethi sika.
Okwesithathu, unelungelo esifanayo ukubuyela ezinsukwini ezingu-14, kanye esitolo, badinga kuphela kuphela ukuba kugcine ilebula kanye nokunikeza izingubo zezingane.
Ungesabi ukuba wenze iphutha ubukhulu, ulinganise sokukhula sengane kanye umthamo thorax. Nikeza idatha ku-intanethi umphathi esitolo, ukuze abone ukuthi ubukhulu ingane ngokunembe ngangokunokwenzeka. Izitolo eziningi inthanethi ukuletha ngobukhulu eziningana, ukuze bakwazi ukubeka isinqumo esifanele. Othile iyisevisi khulula, umuntu kuyodingeka yokuyikhokhela.
Sithemba ukuthi i-athikili yethu eye yakusiza ukuba ukungabaza ukukukhuthaza ukuthi ukuthenga izingubo zezingane ezitolo ilula, futhi ngisho elula futhi kumnandi.